Okthoba 26, 2010 at 6:14 pm
Le plugin kuyinto amazing. Lawula isayithi nge ngezilimi ezehlukene manje umdlalo kids.
Ngiyabonga ngomsebenzi wakho.
Sawubona, kusukela ngcono okuzenzakalelayo kuya 0.65 Nginenkinga emakhasini zami: ifayela lolimi de_DE.po yaseJalimane babebonakala embi. Esikhathini uhlu izihloko ne amafomu isikhashana izinyanga le nguqulo akwenza hhayi izwi. Ngakho instea of “Okthoba” ungase ubone Translation ephelele German “Okt_Oktober_abbreviation”. Kuphela uma amagama isiNgisi German ziyefana bekubonakala kukhonjisiwe ngalokungiko. Ngakho ingasebenzi 0.65, emuva 0.61 (nge 0.64 Ngizozama kamuva) – futhi: yonke into ihamba inhlawulo. Manje sengiyabona “Okthoba”…
Will hlola lokhu, ngokuba manje Nokho ungakwazi CISHE ukhubaze ukuhlanganiswa gettext kule plugin entsha, okuyinto ungcono downgrading
Ngisebenzise plugin lakho kumasayithi amaningi. Kuyasiza sites zami indexing enhle by Google, Nokho, izindawo njalo imiswe ngu umhlinzeki ibamba ngenxa iseva high viral.
Ngaphambi, I sebenzisa it http://getfreegames.info, kodwa manje, i kufanele isuse kuso. Ungakwazi ungiphe isixazululo (musa sikusho ngcono ibamba)?
Ngeke uthi kumelwe ngcono Ukubamba yakho, nakuba kungenzeka ukuthi kuwumbono omuhle.
What ongakwenza ukusebenzisa amakhambi ahlala ambalwa kunokwenzeka:
1. Sebenzisa Apc, kuyonciphisa iseva Ngena khulu
2. Sebenzisa supercache noma efanayo, lokhu kunezinzuzo wabo nabanye yokuntula
• Ukunciphisa mthwalo yokulimaza elizenzakalelayo kolimi yokuhumusha, okuzobe ukuvimbela transposh kusuka egijima emakhasini akho olimi, ngokuvamile uthatha ingxenye enkulu hits.
yimuphi omunye izixazululo owamukelwa
Siyabonga ngokushesha impendulo yakho!
You asho I kufanele ungahloli: “Vumela elizenzakalelayo translation kolimi (Vumela ukuhumusha zokwehluleka kolimi – okuwusizo okumelwe sites nabantu abaningi ngolimi ezinkulu)”. ?
a ukukhululwa entsha, ukugula zama manje